साउदीका प्रमुख सहर लकडाउन, बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि कर्फ्यु- विश्व - कान्तिपुर समाचार
साउदीका प्रमुख सहर लकडाउन, बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि कर्फ्यु
सहमतिबेगर तलब काट्न पाइँदैन : साउदी
कर्फ्यु तोड्नेलाई १० हजार रियाल जरिवाना
काठमाडौँ — साउदी अरबले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि प्रमुख प्रशासकीय सहरहरुमा लकडाउन गरेको छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भने कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको छ ।
साउदी अरबको राजधानी रियाद, मक्का र मदिनामा लकडाउन गरिएको हो । यी सहरमा आवातजावतमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चार माध्यमले जनाएका छन् । साउदी अरबमा झन्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली कामदार छन् ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चालेको कदमलाई पालना गर्न नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ । कर्फ्यु उल्लंघन गर्नेलाई १० रियाल जरिवना र २० दिनको जेलसम्म सजाय हुने दूतावासले जनाएको छ ।
साउदी अरबमा एकैदिन कोरोना भाइरसबाट २ सय ५ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि साउदीले प्रमुख सहरमा लकडाउन र कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. अल अब्देलआलीका अनुसार भाइरसबाट संक्रमितको संख्या ७ सय ६७ पुगेको छ । जुन खाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी साउदीमै देखिएको हो ।
साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले हालसम्म भाइरसबाट नेपाली कामदार संक्रमित नभएको बताए । उनले साउदी सरकारले सुरक्षाका लागि जारी गरिएको मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साउदीमा डिउटी रोकिएको छैन
६ वर्षदेखि साउदी अरबको जेद्दास्थित बहरा केवुल कम्पनीमा कार्यरत काभ्रेका देवीराम काफ्लेको डिउटी रोकिएको छैन । त्यो कम्पनीमा झन्डै ४ हजार कामदार छन् । साउदी अरबमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढिरहे पनि कामदारको डिउटी चलिरहेको छ ।
‘हामी बसेको नजिकै सहरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित देखिएको छ । तर हाम्रोतिर देखिएको छैन । यसको त्रास त फैलिएको छ’, उनले भने,‘कम्पनीले एकजना कामदार कोरोनाबाट संक्रमित नहोस् भनेर निकै सजगता अपनाएको छ ।’
उनी बस्ने भिल्लामा झन्डै ४५ जना कामदार राखिएको छ । ‘डिउटी जाने र आउने बेला ज्वारोको मापन गरिएको छ । बस्ने कोठाहरुमा औषधि छरिएको छ । माक्स, ग्लोवको बन्दोवस्त मिलाएको छ’, उनले भने,‘कम्पनीमा कार्यरत एक जनालाई देखिएमा पुरै कम्पनी नै धरापमा पर्छ । त्यही भएर कम्पनीले एकदमै सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिएको छ ।’
साउदीको अलकसिम क्षेत्रमा कार्यरत विशाल श्रेष्ठले कम्पनीले हरेक कामदारलाई ‘किट ब्याग’को ब्यवस्था गरेको बताए । ‘हाम्रो काम फिल्डमा जानुपर्ने हो । खाद्यान्य सामान सप्लाई गर्ने भएकोले अहिलेको अवस्थामा झन बढी जिम्मेवारी छ’, उनले कान्तिपुरलाई भने,‘फिल्डमा जानुपर्दा हरेक कामदारले किट ब्याग बोकेकै हुनुपर्छ । किट ब्यागमा एक पकेट माक्स, हातमा लगाउने ग्लोवहरु, सावुन र स्यानीटाइजर हुन्छ ।’
कम्पनीले फिल्डमा कार्यरत कामदारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन सुरक्षित रहने उपायहरु दिइरहेको छ । ‘अन्य कम्पनीले कसरी व्यवस्था गरेको छ । थाहा छैन । तर, हाम्रो कम्पनीले सुरक्षा अधिकृतलाई क्याम्प र साइडमा खटाएको छ । उनीहरुलाई यसबारे प्रत्येक कामदारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ’, साउदीको दमाम क्षेत्रमा कार्यरत तेजबहादुर थापाले भने,‘कतिफ क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई भने बिदा दिइएको छ । उनीहरुलाई तलब काटिने छैन । कम्पनीले कोभिड–१९ विरामी बिदा भनेर थप गरिएको छ । अब यो बिदा पाउने कसैको पनि तलब काटिने छैन ।’
मानव साधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी तथा कामदारको सहमतिबेगर वेतलबी बिदा दिन नमिल्ने जनाएको छ । साउदीले श्रम कानुनलाई पालना गर्न सबै निजी कम्पनी तथा फर्महरुलाई अनुरोध गरेको साउदी प्रेस एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । ‘साउदी श्रम कानुनको अवज्ञा गरी कामदारको इच्छाविपरीत बिनापारिश्रमिक बिदा बस्न बाध्य बनाइएमा उजुरी दिन सकिनेछ । कामदारले सिधै साउदीको श्रम कार्यालय वा साउदीको हटलाइन १९९११ नम्बरमा फोन गरी गुनासो टिपाउन सकिनेछ । नेपाली दूतावासको हटलाइन (०५५९३८९६००) मा उजुरी दिन सकिनेछ’, राजदूत राजपुतले भने,‘दूतावासले यहाँका सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्नेछ ।’
नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न हिसाबले प्रभावित भएका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि केही सुविधा दिएको छ । साउदी सरकारले आप्रवासी कामदारको आवागमनमा रोक लगाएको मितिदेखि ३ महिनासम्मको श्रम भिसाका लागि तिरेको शुल्क रोजगारदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘रोजगारदाताले कामदारबाट यो अवधिको भीसा शुल्क भनेर कुनै लिन पाउने छैनन् । यसो गरेमा रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्नेछ । कुनै रोजगारदाताले भीसाको शुल्क लिएमा उजुरी गर्नुहोला । राहदानीमा भीसा छाप हानेको छ भने पनि यो अवधि गणना हुने छैन’, राजपुतले भने,‘साउदीबाट बाहिर निस्कन भिसा लागेका वा फेरि साउदी आउनको लागि नवीकरण भई आवागमन बन्द भएका कारण प्रयोग नभएका भिसाहरु ३ महिनाको अवधिका लागि बिना कुनै शुल्क म्याद थप हुनेछन् ।’
साउदीले परिचय पत्र (अकामा) को अवधि सकिएमा कामदारले तिर्दै आएको लेबी ३ महिनासम्मका लागि माफ गर्ने र अकामा नि:शुल्क नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
उद्धार समिति गठन
गैर आवासीय नेपाली संघ, साउदी अरबले कोरोना भाइरस महामारीबाट कामदारमा आइपर्ने आपत्‌कालीन परिस्थितिमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नको लागि उद्धार समिति गठन गरेको छ । समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार रिजाल (जेद्दा), उपाध्यक्ष भोलानाथ पौडेल (दमाम), उपाध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठ (दमाम), उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ (अल–कासिम), कार्यवाहक महासचिव लालबहादुर मगर (जिजान), कोषाध्यक्ष सन्तोष लुइँटेल (जेद्दा) प्रवक्ता विष्णु न्यौपाने (जेद्दा), सल्लाहकार भक्त हमाल (ताबुक) र रियादका क्षेत्रीय अध्यक्ष मेनुका सिटौला ओडारी रहेका छन् ।
साउदीमा गत सातादेखि लागू हुने गरी १४ दिनका लागि होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको छ । २३ मार्चदेखि लागू हुने गरी साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २१ दिने कर्फ्यु छ ।
संघले साउदी अरबलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर बस्दै आएका नेपालीलाई नआत्तिन, नहड्बडाउन, सशंकित नहुन, भ्रमित नहुन र साउदी सरकारले जारी गरेको हरेक नीति निर्देशन पूर्ण रूपमा पालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १८:४६
चैत्र १२, २०७६ कृष्ण आचार्य
काठमाडौँ — सरकारले दुई महिनादेखि बन्द रहेका चीनतर्फका दुई नाका तत्काल खोल्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिणी नाकातर्फ आयात घट्दै गएका बेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
‘स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा मिलाएर केही दिनमै चीनतर्फका नाका खोल्छौं,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।
नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन र कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासले एजेन्ट, कामदार तथा सरकारी कर्मचारी काममा जान छाडेपछि उपभोग्य वस्तुको आयात घट्न थालेको छ । नाकामा संक्रमण फैलन नदिन उच्च सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा र अन्तरसम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । भारतबाट दैनिक हजारदेखि १२ सयसम्म ट्रक तथा कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरेकामा दुई दिनयता प्रतिदिन २ सय ५० ट्रक र कन्टेनर आइरहेका छन् ।
नेपालबाट भारततर्फ निर्यात ठप्प छ । अहिले उत्तरी नाका कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् । नेपालले यसै साताबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत बन्द गरिसकेकाले हवाई माध्यम हुँदै आउने सामान पनि रोकिएका छन् ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भारतबाट हुने आयातमा दुई दिनदेखि समस्या देखिएको बताए । ‘भन्सार एजेन्ट तथा व्यापारी नै सामान अर्डर गर्न र नाकामा आइसकेका सामान छुटाउन आउन छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘मंगलबार र बुधबार दुवै दिनको आयात खासै उत्साहजनक भएन ।’
आपूर्ति प्रणालीका विषयमा भारतीय दूतावास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जनाए । ‘मालवाहक सवारी साधनलाई कतै रोकेका छैनौं भनेर भारतीय दूतावासले भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भन्सार कार्यालय खुलै राखिएको जनाएका छन् । हाम्रा भन्सार कार्यालय पनि खुलै राखेका छौं । व्यापारीले हवाई तथा स्थल यातायात बन्द भएकाले आउजाउ गर्न समस्या परेको बताउने गरेका छन् ।’
तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने सामग्रीसमेत भारत हुँदै आउने भएकाले दुई दिनयता देखिएको समस्याले उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन सक्छ । यसबारे सरकारले गम्भीर भएर नसोचेको आयातनिर्यात क्षेत्रका व्यापारीहरूले बताए । संक्रमण रोक्ने सुरक्षाका विषयमा नाकामा उच्च सावधानी नअपनाइएको र अत्यावश्यक क्षेत्रको आउजाउमा सरकारको कमजोर व्यवस्थापन रहेको नेपाल फ्रेर्ट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले बताए । ‘भन्सार खुले बैंक खुल्दैन, एजेन्ट गए भन्सार खुल्दैन, बैंक खुले बाहिरबाट कागजात पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्सारबाट सामान छुटाउन कम्तीमा ४/५ वटा निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’
नाकामा संक्रमण नफैलिन उच्च सतर्कता नअपनाइएको र हिँडडुल गर्नेहरूलाई नबुझी अभद्र व्यवहार गर्ने गरिएको हुनाले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आपूर्ति प्रणालीमा एउटा लिंक टुट्यो भने पूरै प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले कता, कहिले कताको लिंक टुटिरहेको छ ।’
आपूर्ति प्रणाली जारी राख्न भन्सार नाकामा उच्च सतर्कता र अन्तरसम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच समन्वय जरुरी देखिएको छ । ‘जस्तो औषधि पसल खोल्ने भनियो तर त्यहाँसम्म कसरी जाने ? प्रहरीले यो मान्छे औषधि नै किन्न हिँडेको भनेर छुट्याउन सकिरहेको छैन,’ शर्माले भने, ‘आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न व्यक्ति तथा सवारीसाधनलाई पनि प्रहरीले त्यसैगरी व्यवहार गर्छ । डराएर कामदार, ड्राइभर, कर्मचारी र व्यापारी नै हिँड्न मानेका छैनन् ।’ गृह मन्त्रालयले नाकामा प्रहरीलाई सही तरिकाले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने र संक्रमण नफैलिने गरी उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले पनि सरोकारवाला निकायले अत्यावश्यक सामग्रीका विषयमा अधिक जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सामान बोकेर हिँड्ने गाडीवाला, भन्सार एजेन्ट र बैंकका कर्मचारीलाई आउजाउमा रोकिएको छैन, तिमीहरू भन्सारसम्म जान सक्छौ, ट्रक कन्टेनर आवतजावतमा समस्या हुनेछैन भनेर बुझाउन बाँकी देखियो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ ।’
सरकारले भारत र चीनतर्फका सबै नाकाबाट मंगलबारदेखि मानिसको आउजाउ बन्द गरे पनि अत्यावश्यक सामग्रीको बिक्री, ओसारपसार र भारततर्फको आयातनिर्यात नरोकिने सरकारले जनाएको थियो । तर भारतमा पनि तीन साताका लागि लकडाउन भएकाले आपूर्तिमा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भने खाद्यवस्तुको ढुवानीमा कुनै समस्या नहुने बताए । उनका अनुसार ३५ ट्रक लोड भइसकेका छन् । थप ८ वटा बाटोमा आउने क्रम छन् । कोलकाता बन्दरगाहबाट पनि खाद्यवस्तुलाई नै प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । ‘ट्रान्जिटमा कुनै समस्या छैन । आन्तरिक मुभमेन्ट के गर्ने भन्ने मात्रै छ,’ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘ड्राइभरहरूलाई ट्रकसम्म पुर्‍याउनुपर्‍यो । मुख्य ड्राइभरको कुरा हो । त्यसलाई छलफल भइरहेको छ ।’
गृह र अर्थले समन्वय गर्ने
उच्चस्तरीय समितिको निर्णयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयातनिर्यात गर्ने भनिएको छ । यससम्बन्धी समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछन् । ‘चीनतर्फ रसुवागढी नाकामा नेपालका लागि हिँडेका करिब २ सय कन्टेनर रोकिएको र त्यो नाका बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय नेपालले नगरेकाले’ भन्दै तत्काल सामान आवतजावत सुरु गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षले नेपाललाई भनिरहेको थियो । सामान आयातनिर्यातबाहेकका क्रियाकलापका लागि चीन र भारततर्फको नाका बन्द गर्ने निर्णय गत सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । दुवै देशबाट सामान ल्याउन पाइने भएकाले चीनतर्फको बन्द नाका खोल्न गत साताबाट गृहकार्य भएको थियो ।
नेपालले गत सातासम्म आउजाउमा चारैतिरबाट कडाइ गर्दै लगेकाले तत्काल चिनियाँ नाका खोल्न चाहेको थिएन । भारतबाट सामान्य अवस्थामा भन्दा आयातमा समस्या देखिएपछि नेपालका सरकारी अधिकारीहरू चिनियाँ नाका खोल्न सहमत भएका हुन् । गत सोमबार अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले आपूर्ति प्रणाली सहज गराउन चीनतर्फका नाका खोल्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका थिए ।
नया वर्षका अवसर पारेर चिनियाँ पक्षले माघ १५ देखि केही दिनका लागि यी नाका बन्द गरेको थियो । लगत्तै कोभिड–१९ फैलिएपछि नाका बन्दलाई चिनियाँ पक्षले नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आयात हुने धेरैजसो सामग्री ०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट भित्रिने गरेका थिए ।
यो नाकालाई ०७४ भदौ १४ गते चीन सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका’ घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको थियो । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चिनियाँ सामग्रीको हिस्सा १६ प्रतिशत छ ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १८:३३